मोटोपन घट्दै–घटेन् भने अपनाउनुहाेस् यस्ता कुरा — Imandarmedia.com
मोटोपन घट्दै–घटेन् भने अपनाउनुहाेस् यस्ता कुरा
काठमाडाैँ । जस्तो, ऐशआरमपूर्ण जीवन, अत्याधिक र जथाभावी खानपान, मदिरा र मासुजन्य पर्दाको अधिक सेवन । वंशानुगात, मोटोपन भएमा के हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ त, तपाईं हामीलाई थाहै छ, शरीर भद्दा हुने मात्र होइन, यसले अनेक रोगको जोखिम बढाइदिन्छ, मोटोपन आफैमा एक समस्या हो, यो अहिले धेरैको निम्ति टाउको दुखाईको विषय पनि छ ।
अब मोटोपन कसरी नियन्त्रण गर्ने ? यसको केही सरल सर्त छन् । जस्तो कि, तपाईंले ऐशआरम त्याग्नुपर्छ, मीठोमसिनो खानेकुरामा लोभ गर्नु भएन जंकफूड, प्रशोधित खानेकुरा, मदिरा वा मसुमा मरिहत्ते गर्नुभएन । व्यायाम गर्नुहोस्, शारीरिक श्रम गर्नुहोस्, पर्याप्त पानी पिउनुहोस्, एकै पटक पेट चर्कनेगरी खानेकुरा नखानुहोस्, पैदल हिँड्नमा जोड गर्नुहोस्, खानामा सलाद र सागसब्जीलाई महत्व दिनुहोस् । यति गर्दापनि मोटोपन घटेन ?
क्रमिक रुपमा हुने लामो प्रक्रिया ? तपाईं सही ढंगले खाना खानै हुन्न, अर्थात हतारमा छिटो-छिटो गाँस टिप्नुहुन्छ, मुखमा खेलाएर निल्नुहुन्छ । राम्ररी चपाउनुहुन्न, जब राम्ररी चपाएर खानेकुरा सेवन गरिन्छ, अर्थात ठोस खानेकुरालाई मुखमै तरल बनाएर निल्छौं, तब मोटोपन बढ्ने संभावना कम हुन्छ ।
तपाईं गुलियो खानेकुराको सौखिन हुनुहुन्छ भने पनि मोटोपन नियन्त्रणमा समस्या हुन्छ, मोटोपन घटाउन धेरैले खानामा कटौती गर्छन् । भोकै बस्छन् । तर, यसले मोटोपन घटाउने होइन, बरु बढाउँछ ।
त्यस्तै खानेकुरा घटाउने चक्करमा हामी खानाको मात्रा भन्दा पनि छाकमा कटौती गर्छौं, तीन वा चार छाकको रुटिन घटाएर दुई वा एक छाक खान्छौं खाएको बेला पेट चर्कनेगरी खान्छौं । अब एकसाथ भारी खाना पचाउन पाचन यन्त्र सक्षम हुँदैन । अतिरिक्त खाना बोसोमा परिणत हुन्छ मोटोपन बढ्छ ।